चिन्ता र फोबिया। – Noor Health Life
चिन्ता र फोबिया।
आतंक एक सामान्य मानव भावना हो। हामी सबैले यो अनुभव गर्छौं जब हामी कठिन वा कठिन समयबाट गुज्रिरहेका छौं।
सामान्यतया डर र चिन्ताले खतराहरूबाट बच्न, सतर्क रहन र समस्याहरूको सामना गर्न मद्दत गर्न सक्छ। यद्यपि, यदि यी भावनाहरू तीव्र हुन्छन् वा लामो समयसम्म रहन्छ भने, तिनीहरूले हामीलाई हामीले गर्न चाहेको कामहरू गर्नबाट रोक्न सक्छ र परिणाम स्वरूप हाम्रो जीवन पीडादायी हुन सक्छ।
फोबिया भनेको कुनै खास परिस्थिति वा चीजको डर हो जुन खतरनाक छैन र सामान्यतया मानिसहरूलाई डरलाग्दो छैन।
आतंक को लक्षण
सधैं चिन्तित महसुस
थकान महसुस गर्दै
फोकस गर्न नसक्नु
मुटुको धड्कन महसुस गर्दै
अत्यधिक पसिना आउने
मांसपेशिहरु मा तनाव र दुखाइ
छिटो सास फेर्न
चक्कर महसुस गर्न
बेहोस हुने डर
चिन्ता भएका मानिसहरूलाई यी लक्षणहरूको कारणले गर्दा उनीहरूमा गम्भीर शारीरिक रोग छ भनी सोच्छन्, चिन्ताले यी लक्षणहरूलाई अझ बढाउँछ। अप्रत्याशित आतंक आक्रमणलाई आतंक आक्रमण भनिन्छ। डिप्रेसन अक्सर चिन्ता र आतंक संग संग छ। जब हामी दुखी हुन्छौं, हाम्रो भोक हराउँछ र भविष्य अन्धकार र अन्धकार देखिन्छ।
फोबिया भएको व्यक्तिमा माथि उल्लिखित चिन्ताका गम्भीर लक्षणहरू हुन्छन्। तर तिनीहरू देखा पर्छन् जब तिनीहरू विशेष परिस्थितिमा हुन्छन् जसमा तिनीहरू धेरै नर्भस हुन्छन्। अन्य समयमा तिनीहरू आत्तिदैनन्। यदि तपाइँ कुकुरसँग डराउनुहुन्छ भने कुकुरहरू तपाइँको वरिपरि छैनन् भने तपाइँ ठीक हुनेछ। यदि तपाईं उचाइसँग डराउनुहुन्छ भने, तपाईं पृथ्वीमा ठीक हुनुहुनेछ। यदि तपाईं भीडसँग सामना गर्न सक्नुहुन्न भने, तपाईं एक्लै हुनुहुनेछ।
फोबिया भएको व्यक्तिले आफूलाई आतंकित गराउन सक्ने कुनै पनि अवस्थाबाट बच्ने प्रयास गर्छ, तर वास्तवमा यो फोबिया समयसँगै झन् गम्भीर हुँदै जान्छ। यसको मतलब यो पनि हुन सक्छ कि पीडितको जीवन परिस्थितिबाट बच्न सावधानी अपनाउनु पर्छ। यो रोग भएका मानिसहरूलाई थाहा छ कि त्यहाँ कुनै वास्तविक खतरा छैन, तिनीहरू आफ्नो डरलाई मूर्खतापूर्ण ठान्छन् तर अझै पनि तिनीहरूले नियन्त्रण गर्न सक्दैनन्। कुनै दर्दनाक घटना वा दुर्घटनाको परिणामको रूपमा सुरु भएको फोबियाहरू समाप्त हुने सम्भावना बढी हुन्छ।
के तिनीहरू सामान्य छन्?
दस जना मध्ये एक जनाले आफ्नो जीवनको कुनै न कुनै बिन्दुमा कुनै न कुनै प्रकारको चिन्ता वा फोबियाको अनुभव गर्छन्। तर, धेरैजसोले उपचार खोज्दैनन् ।
हामी मध्ये कसैको हरेक कुरामा चिन्तित हुने प्रवृत्ति हुन्छ। अनुसन्धानले देखाएको छ कि त्यस्ता लक्षणहरू जीन मार्फत वंशानुगत हुन सक्छ। तर, सधैं स्वाभाविक रूपमा चिन्तित नहुने व्यक्तिहरू पनि निरन्तर दबाबमा रहँदा नर्भस हुने गर्छन् ।
कहिलेकाहीँ आतंकको कारण धेरै स्पष्ट हुन्छ र जब समस्या हल हुन्छ तब त्रास हट्छ। तर केही घटनाहरू र परिस्थितिहरू यति दर्दनाक र डरलाग्दो हुन्छन् कि तिनीहरूले उत्पन्न गरेको त्रास घटनाहरू समाप्त भएपछि लामो समयसम्म रहन्छ। यी सामान्यतया घटनाहरू हुन् जसमा मानव जीवन खतरामा हुन्छ जस्तै कार वा रेल दुर्घटना र आगलागी आदि। यी घटनाहरूमा संलग्न व्यक्तिहरू महिनौं वा वर्षौंसम्म चिन्ता र डिप्रेसनबाट पीडित हुन सक्छन्, यद्यपि उनीहरूलाई कुनै शारीरिक चोटपटक नलागेको छ। यी लक्षणहरू पोस्ट ट्राउमेटिक स्ट्रेस डिसअर्डरमा पाइन्छ।
कहिलेकाहीँ एम्फेटामाइन्स, एलएसडी वा एक्स्टेसी जस्ता औषधिहरूको प्रयोगले पनि चिन्ता निम्त्याउन सक्छ। कफीमा रहेको क्याफिन पनि हामी मध्ये कसैलाई नराम्ररी पीडा दिन पर्याप्त हुन्छ।
अर्कोतर्फ, यो स्पष्ट छैन कि एक विशेष व्यक्ति किन चिन्ताबाट ग्रस्त हुन्छ। यो तिनीहरूको व्यक्तित्वको कारणहरू, उनीहरूमा घटेका घटनाहरू र तिनीहरूको जीवनमा परिवर्तनहरू जस्तै बच्चाको जन्मको कारण हो।
सहयोगको लागि अनुरोध गर्दै
यदि हामी धेरै दबाबमा छौं भने, हामी अक्सर चिन्तित र डराउँछौं। हामी सामान्यतया यी अवस्थाहरूसँग व्यवहार गर्छौं किनभने हामीलाई कारण थाहा छ र हामीलाई थाहा छ कि परिस्थिति कहिले समाप्त हुन्छ। उदाहरणका लागि, हामीमध्ये धेरैजसो ड्राइभिङ परीक्षण अघि नर्भस हुन्छौं तर हामी यसलाई पार गर्छौं। किनकि हामीलाई थाहा छ कि परीक्षा सकिएपछि, आतंक हट्नेछ।
तर कतिपय मानिसहरु धेरै लामो समय सम्म यो आतंक र डर को भावनाहरु को लागी ग्रस्त छन्, उनिहरु लाई थाहा छैन कि उनीहरु किन आतंकित छन् र यो त्रास कहिले र कसरी समाप्त हुन्छ। यो नियन्त्रण गर्न गाह्रो छ र सामान्यतया केहि मद्दत चाहिन्छ। धेरै जसो समय मानिसहरू मद्दत प्राप्त गर्न चाहँदैनन् किनभने तिनीहरू सोच्छन् कि मानिसहरूले आफूलाई पागल ठान्नेछन्। यद्यपि, तथ्य यो हो कि चिन्ता र डर भएका मानिसहरू विरलै गम्भीर मानसिक रोगबाट पीडित हुन्छन्। जति छिटो मद्दत खोजियो, त्यति राम्रो।
चिन्ता र डर भएका व्यक्तिहरूले यी भावनाहरूको बारेमा कसैसँग कुरा गर्दैनन्, परिवार वा नजिकका साथीहरूलाई पनि। तैपनि, आफ्नो स्वामित्व प्राप्त गर्न अझै पनि औसत व्यक्तिको पहुँच बाहिर छ। अवस्था भएको व्यक्ति फिक्का र तनावग्रस्त देखिनेछ, र ढोकाको घण्टी वा कारको हर्न जस्ता सामान्य आवाजले छक्क पर्नेछ। तिनीहरू चिडचिडा हुन्छन् र यसले उनीहरूका नजिकका मानिसहरूसँग तर्क गर्न सक्छ, विशेष गरी जब उनीहरूलाई थाहा छैन कि बिरामीले किन केही चीजहरू गर्न सक्षम छैन। यद्यपि साथीहरू र परिवारले चिन्ताले गर्दा हुने पीडा बुझ्छन्, तिनीहरूले यी सबै चिन्ताहरू निराधार छन्।
बालबालिकामा चिन्ता र फोबिया
धेरैजसो बालबालिका कहिलेकाहीँ कुनै न कुनै कारणले डराउँछन्। यो विकास को समयमा सामान्य छ। उदाहरणका लागि, साना केटाकेटीहरू उनीहरूको हेरचाह गर्ने मानिसहरूसँग अभ्यस्त हुन्छन्, र यदि कुनै कारणले उनीहरूबाट अलग भएमा, बच्चाहरू धेरै निराश र नर्भस हुन्छन्। धेरै बच्चाहरु अन्धकार वा भूत देखि डराउँछन्। यी डरहरू सामान्यतया कम हुन्छन् जब तिनीहरू बढ्छन् र बच्चाहरूको जीवन वा विकासलाई असर गर्दैनन्। धेरैजसो बालबालिका विद्यालयको पहिलो दिनजस्ता महत्त्वपूर्ण घटनाहरूबाट डराउँछन् तर पछि यो डर हटेर नयाँ परिस्थितिमा अभ्यस्त भएर रमाइलो गर्न थाल्छन्।
किशोरकिशोरीहरूको मूड अक्सर परिवर्तन हुन्छ। तिनीहरूको चिन्ताको कारण फरक-फरक हुन सक्छ, जस्तै तिनीहरू कस्तो देखिन्छन्, अरू मानिसहरूले तिनीहरूबारे के सोच्छन्, तिनीहरूले सामान्य रूपमा मानिसहरूसँग कसरी सम्बन्ध राख्छन्, र तिनीहरूले विशेष गरी विपरीत लिङ्गीसँग कसरी सम्बन्ध राख्छन्। यी समस्याहरूको बारेमा कुरा गरेर हटाउन सकिन्छ। यद्यपि, यदि यी समस्याहरू बढ्दै गए भने, धेरै मानिसहरूले उनीहरूले विद्यालयमा राम्रो प्रदर्शन नगरेको, उनीहरूको व्यवहार परिवर्तन भएको वा शारीरिक रूपमा फिट नभएको देख्न सक्छन्।
यदि कुनै बच्चा वा जवान व्यक्तिलाई चिन्ता, त्रास वा डरले आफ्नो जीवन बर्बाद गरिरहेको महसुस हुन्छ भने, उनीहरूले पारिवारिक चिकित्सकसँग परामर्श गर्नुपर्छ।
चिन्ता र फोबिया भएका मानिसहरूलाई मद्दत गर्दै
समस्याको बारेमा कुरा गर्दै
यदि समस्या तत्काल प्रकृतिको हो भने, यो उपयोगी हुन सक्छ, जस्तै जीवनसाथीबाट अलग हुनु, बच्चाको बिरामी वा जागिर गुमाउनु। कोसँग कुरा गर्ने? आफन्त वा साथीहरूसँग कुरा गर्नुहोस् जसलाई तपाईंले विश्वास गर्नुहुन्छ, जसले तपाईंको विचारलाई महत्त्व दिन्छ, र जसले तपाईंलाई राम्रोसँग सुन्छ। तिनीहरू समान समस्याहरूबाट गुज्रिएका हुन सक्छन् वा तिनीहरूले यस्तै परिस्थितिबाट गुज्रिएको कसैलाई चिनेका हुन सक्छन्। कुरा गर्ने अवसरको साथसाथै हामीले अन्य व्यक्तिहरूले कसरी त्यस्ता समस्याहरूको सामना गरेका छन् भनेर पनि पत्ता लगाउन सक्छौं।
शान्त हुन सिक्नुहोस्
शान्त रहन एक विशेष तरिका सिक्न चिन्ता र चिन्ता हटाउन मद्दत गर्न सक्छ। यो समूहमा, विशेषज्ञहरूको सहयोगमा, र पुस्तकहरू र भिडियो टेपहरू मार्फत पनि सिक्न सकिन्छ। यो अभ्यासबाट लाभ उठाउने एउटै तरिका भनेको कुनै व्यक्तिलाई समस्या भएको बेलामा मात्र नभई नियमित रूपमा गर्नु हो।
यो संचार को एक अधिक व्यापक तरीका हो जसले हामीलाई चिन्ता को कारणहरु पहिचान गर्न मद्दत गर्न सक्छ जुन हामीले अझै पहिचान नगरेका छौं। यो प्रक्रिया व्यक्तिगत रूपमा वा समूहहरूमा गर्न सकिन्छ र सामान्यतया धेरै हप्ता वा महिनाको लागि साप्ताहिक आधारमा गरिन्छ। मनोचिकित्सकहरू डाक्टर हुन सक्छन् वा नहुन सक्छन्।
केही मानिसहरूलाई चिन्ता र फोबियाको उपचार गर्न औषधिहरू पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
सामान्य सेडेटिभहरूमा विलियम-जस्तो औषधिहरू समावेश हुन्छन् (धेरै जसो सुत्ने चक्कीहरू, यस प्रकारको औषधिसँग सम्बन्धित)। यी औषधिहरू चिन्ता कम गर्न धेरै प्रभावकारी छन्, तर ध्यान राख्नुहोस् कि केवल चार हप्ताको नियमित प्रयोगले, एक व्यक्तिलाई यसको लत लाग्न सक्छ र जब मानिसहरूले छोड्ने प्रयास गर्छन्, उनीहरूले अप्रिय लक्षणहरू अनुभव गर्नेछन्। जुन लामो समयसम्म रहन सक्छ। यी औषधिहरूको प्रयोग चिन्ताको दीर्घकालीन उपचारको लागि उपयुक्त छैन।
एन्टीडिप्रेसन्टहरू चिन्ता र अवसादको उपचार गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ (जसका लागि तिनीहरू सामान्यतया निर्धारित हुन्छन्)। यी औषधिहरु मध्ये केहि निश्चित प्रकार को चिन्ता मा विशेष प्रभाव छ। एक नकारात्मक पक्ष यो हो कि तिनीहरू दुई देखि चार हप्तामा प्रभावकारी हुन्छन् र वाकवाकी, निद्रा, चक्कर, सुख्खा मुख र कब्जियत हुन सक्छ। थप प्रश्न र जानकारीको लागि तपाईंले Noormedlife@gmail.com मा इमेल र व्हाट्सएप मार्फत नूर हेल्थ लाइफलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ